अभिनेत्री एलिजा गौतमले बिप,न्न परिवारका लागि सबै जिल्ला पिच्छे १० घर ब,नाइदिने घोषणा – Ap Nepal
अभिनेत्री एलिजा गौतमले बिप,न्न परिवारका लागि सबै जिल्ला पिच्छे १० घर ब,नाइदिने घोषणा
काठमाडौं, २ पुस । अभिनेत्री तथा समाजसेवी एलिजा गौतमले देशका ७७ जिल्लामा प्रत्येक जिल्लामा दश/दश वटा घर बनाउने घोषणा गरेकी छिन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नायिका गौतमले प्रत्येक जिल्लामा दुखी असहायको लागि दश÷दबवटा घर बनाउने घोषणा गरेको जानकारी दिएकी हुन् ।
चैत ११ को बर्थडेमा धादिङदेखि घर बनाउने उनको अभियान थालनी हुनेछ । सबै जिल्ला पिच्छे १० घर बनाउने योजनामा उनी जुटेकी छन् । दुर्गम भेगका विपन्न परिवारलाई लक्षित गरेर भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने उनको योजना छ ।
‘पहिल्यैदेखि समाजसेवाको क्षेत्रमा ठूलै केही गरौं भन्ने योजना थियो’ नेपाल प्रेससँग उनले भनिन्, ‘गरिब परिवारका लागि बस्ने आवास बनाइदिने योजना छ । त्यसको सुरुवात मेरो जन्मदिनदेखि हुनेछ ।’ सकेसम्म मुलुकका सबै जिल्लामा घर बनाउने उनको योजना छ ।
एलिजा फाउन्डेसनको तर्फबाट उनले घर बनाउन लागेकी हुन् । अनुराग फिल्मकी डेब्यु अभिनेत्रीले चाँडै नयाँ फिल्म समेत घोषणा गर्ने भएकी छिन् । ‘मनोरञ्जनसँगै सामाजिक कार्यलाई पनि अघि बढाउनेछु’ एलिजाले भनिन्, ‘लामो समयदेखिको मेरो सपना चाँडै पुरा हुने विश्वासमा छु ।’
Prevआज नेपाल पैसा पठाउँदै हुनुन्छ ? हेर्नुहोस यस्तो छ बिनिमय दर
Nextम’हिना’वारीको समयमा यौ;न सम्पर्क गर्न हुन्छ की हुदैन ? निसन्ता’नपनको उप’चार के हो ? डा. सबिनाको सु’झाब (भिडियो सहित कुराकानी)
ए’क्कासी के भयो गायक पशुपति शर्मालाई ? (हेर्नुहोस् म्युजि;क भिडि’ यो सहित)
नेपालमा निरन्तर मूल्यवृद्धि : तेल र घ्यूको मुल्यमा उच्च मूल्यवृद्धि..
निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै टेलिकमले दियो यस्ता अफर, कसरी सुचारु गर्ने त ?